रविलाई कहाँ कसरी ठे*गान ल*गाउनुपर्छ वा उ*कास्नुपर्छ ? त्यो त मलाई थाहा छ , किशोर श्रेष्ठको टेलिफोन वार्ता लि*क - Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/रविलाई कहाँ कसरी ठे*गान ल*गाउनुपर्छ वा उ*कास्नुपर्छ ? त्यो त मलाई थाहा छ , किशोर श्रेष्ठको टेलिफोन वार्ता लि*क
श्रेष्ठले अ*नावश्यक हिरो हुन खोज्नु जरुरी छैन भन्दै कार्यक्रम प्रोड्युसरको ना*ताले त्यसको ज*वाफदेही बोहरा पनि हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । श्रेष्ठले शालिकराम पुडासैनीको आ*त्मह*त्या प्रकरणमा प*र्दाप*छाडिको भूमिका आफूलाई राम्रैसँग थाहा भएको बताउँदै भनेका छन्, ‘‘तपाईंहरुले गरेका सबै त*थ्य मसँग छ । हा*वाहु*ण्डरीको पछि लागेको भदै भएन । तपाईंका ग*तिविधि र ध*न्दाहरु मलाई थाहा छ नि । रवि लामिछानेजस्तो फ*टिचरलाई उ*कास्ने ?’’बाँकी कुराकानी सुन्नुहोस्। भिडियो
शिशिर भण्डारीलाई यति ठुलो सम्मान! बिनोद रानाभाटलाई ८२ लाख उठेपछि ! देशको इज्जत राखे भन्दै यस्तो गरियो- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)